July 25, 2019 - ThutaSone
နိုင်ငံတကာမသန်စွမ်း ရေကူးချန်ပီယံ အောင်ငြိမ်းဦး .. မိခင် နဲ့ ပြန်ဆုံခွင့် ရသွားပြီ
July 25, 2019 ThutaSone 0
နိုင်ငံတကာမသန်စွမ်း ရေကူးချန်ပီယံ အောင်ငြိမ်းဦး .. မိခင် နဲ့ ပြန်ဆုံခွင့် ရသွားပြီ နိုင်ငံတကာ မသန်စွမ်းရေကူးပြိုင်ပွဲ ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်၊ မသန်းစွမ်း အားကစားသမား၊ ရေကူးချန်ပီယံ အောင်ငြိမ်းဦး ဟာ နှစ်(၃၀)ခန့်ကွဲကွာနေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ဒီကနေ့၊ ဇူလိုင်လ (၂၅) ရက်နေ့မှာ ပြန်လည်ဆုံစည်းခွင့်ရသွားပါပြီ။ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ချို […]
ရေနံချောင်းမြို့နယ်ကစက်လှေတိမ်းမှောက်ခဲ့ရတဲ့ အဓီကတရားခံတွေ ပြောလိုက်ပါပြီ…
ရေနံချောင်းမြို့နယ်ကစက်လှေတိမ်းမှောက်ခဲ့ရတဲ့ အဓီကတရားခံတွေ ပြောလိုက်ပါပြီ… နယ်မြေအငြင်းပွားပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ရာမှ စက်လှေတိမ်းမှောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ် – နောက်ဆက်တွဲသတင်း ရေနံချောင်းမြို့နယ်က ကျေးရွာနှစ်ရွာကဒေသခံတွေ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့က နယ်မြေအငြင်းပွားပြီး ပဋိပက္ခဖြစ်ရာကနေ စက်လှေတိမ်းမှောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ လတ်တလော လူ ၁၆ ဦးသေဆုံးကာ ၃၉ ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ […]
သမီး​လေးဗစ်​တိုးရီးယားပုံကို​တွေ့​အောင်​ရှာပြီး အွန်​လိုင်​း​ပေါ် ဖြန်​့ပစ်​မယ်​ဆိုတဲ့သူက ​ကျောင်​းဆရာတစ်​ဦးဖြစ်​​နေ
သမီး​လေးဗစ်​တိုးရီးယားပုံကို​တွေ့​အောင်​ရှာပြီး အွန်​လိုင်​း​ပေါ် ဖြန်​့ပစ်​မယ်​ဆိုတဲ့သူက ​ကျောင်​းဆရာတစ်​ဦးဖြစ်​​နေ ဗစ်​တိုးရီးယား​လေးကို ရိုင်​းပျ​အောက်​တန်​းကျစွာ ​စော်​ကားပုတ်​ခတ်​ပြီး အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေး ပုံကို ဖြန့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်စော်ကားတဲ့သူ​တစ်​​ယောက်​ရဲ့လုပ်​ရပ်​လဲ အွန်​လိုင်​းမှာ​ပေါ်လာခဲ့ပြီး သမီး​လေးရဲ့အမှန်​တရားအတွက်​ Justice For Victoria အဖြစ်​ ရပ်​တည်​ခဲ့ကြတဲ့ ပြည်​သူအများ အင်​မတန်​စိတ်​မ​ကောင်​းစရာဖြစ်​ခဲ့ရတာ အမှန်​ပါ။ဖြစ်​စဉ်​က ဒီလိုပါ။ သူဟာ ဗစ်​တိုးရီးယား​လေးအမှုကို […]
သူမရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ရောင်းချပြီးမိခင်၏ အသက်အတွက်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး
သူမရဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို ရောင်းချပြီးမိခင်၏ အသက်အတွက်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး အသက်၄၅နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Caoရဲ့အမေဟာ အရေပြားကင်ဆာရောဂါကို ခံစားနေရတာပါ။ နောက်ဆုံး နည်းလမ်းရှာမရတော့တဲ့ အသက်၁၉နှစ်အရွယ် Caoဟာ သူအရမ်းချစ်ရတဲ့မိခင်ကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် နောက်ဆုံးနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Caoဟာ သူမကိုယ်သူမရောင်းမယ်ဆိုပြီး Wechatမှာ ကြေညာတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့သူခိုင်းသမျှလုပ်ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီး ကတိပေးထားတဲ့ Caoဟာ လယ်သမားမိသားစုကဖြစ်ပြီး […]
သတို့သားလက်ထဲးကိုသမီးအလိမ္မာအပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဖခင်၏ သနားဖွယ်အပြုအမူ
သတို့သားလက်ထဲးကိုသမီးအလိမ္မာအပ်ရမယ်ဆိုတော့ ဖခင်၏ သနားဖွယ်အပြုအမူ သားသမီးနဲ့ မိဘတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ အရင်းနီးဆုံးဆွေမျိုးသားချင်းများ ဖြစ်သည့်အလျှောက် တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးအလေးထားမှု၊ မြတ်နိုးတွယ်တာမှုတွေဟာ တစ်ခြားသူတွေထက် ပိုသာနေမယ်ဆိုတာ ငြင်းဖွယ်ရာ မရှိပါဘူး။ မိဘတွေဟာ သားတွေ သမီးတွေကို ဆတူချစ်ကြတယ်ဆိုသော်လည်း- ခြွင်းချက်အနေနဲ့ သားလိမ္မာ၊ သမီးလိမ္မာလေးတွေကို တစ်ခြားသားသမီးတွေထက် ပိုပြီး မြတ်နိုးလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေကျတော့လည်း […]
ဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးမျိုးနဲ့ဘဝဆက်တိုင်ဆက်တိုင်ဘယ်တော့မှမကြုံပါစေနဲ့ ဟောင်းနွဲ့ရွာ မလှိုင်မြို့နယ်(ဇီးတောဆည်)အတွင်းစက်လှေတိမ်းမှောက်မှု့ဖြစ်စဉ်တွင် မြစ်သားမြို့နယ် ဟောင်းနွဲ့ကျေးရွာမှသေးဆုံးသွားသူများအား မီးသဂြိုလ်မြင်ကွင်း…… Credit~Original Writer✍️📷 ဆက်ဆက်သတင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသ ကြီး မလှိုင်မြို့နယ် ဇီးတောဆည် အ တွင်း စက်လှေမှောက် ၍ လှေပေါ် ပါသူများ အနက် ၁၄ ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦး ပျောက်ဆုံးေ နကြောင်း […]
ဗိုက်ထဲ သားအိမ်မှာရေအိပ်တည်လျှင် ကျောက်ဖရုံသီးကို ဖက်အိပ်ပါ…
ဗိုက်ထဲ သားအိမ်မှာရေအိပ်တည်လျှင် ကျောက်ဖရုံသီးကို ဖက်အိပ်ပါ… ဗိုက်ထဲ သားအိမ်မှာရေအိပ်တည်လျှင် ထိုရေအိပ်ထဲမှရေများ osmosis ဖြင့် ကျောက်ဖရုံသီးထဲသို့ စိမ့်ဝင်သွားလိမ့်မည်…ဟုပြောပါသည်.. မနက်ကျောက်ဖြုံ သီးခွဲလျှင် ကျောက်ဖြုံသီးထဲမှရေများထွက်လာလိမ့်မည်… ထိုနည်း ၄င်း… ရေဖျင်း စွဲသူများလဲ စမ်းသပ်နိုင်သည်… ဗိုက်ထဲက ရေများ ကျောက်ဖြုံသီးထဲသို့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်သည်…. ဖောက်ထုတ်စျာတောင်မလိုတော့ဘူး… Hydrocele ဆိုလျှင် […]
ကားစျေးတွေ ကျလာနိုင််မလားစက််မှုဝန်ကြီး ဦးခင််မောင်ချို အဖြုတ်ခံံရပြီ
ဝန်ကြီးအပြောင်းအလဲကနေ ကားမူဝါဒတွေပြောင်းလဲဲလာနိုင်သလား စက်မှုဝန်ကြီး ဦးခင််မောင်ချို အဖြုတ်ခံရတော့မယ်လို့ ကြားပါတယ်။ ဒီသတင်းမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ကားလောကအတွက် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာမလားလို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် သူ့ကိိုစခန့်ကတည်းက အသိပေးပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဝန်ြ်ကီးမဖြစ်ခင်မှာ ဦးခင်မောင်ချို က SSS ကားကုမဏီမှာ စက်ရုံမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ သူ စက်ရုံမှူးတာဝန်အဖြစ်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာ SSS က ကိုရီးယားမှာ ၁၀၀% […]
အောင်ကြီးကသူကိုထိုးကြိတ်ဝင်ခံခိုင်းလဲ သူအသေခံမှာပါတဲ့သူဝန်မခံဘူးလို့ဆို အောင်ကြီးက သူအဖေနဲ့သူအမေကိုပြောဖူးပါတယ် သူမဟုတ်တဲ့အကြောင်း သူကိုထိုးကြိတ်ဝင်ခံခိုင်းလဲ သူအသေခံမှာပါတဲ့သူဝန်မခံဘူးလို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောပါတယ် ကျွန်မကလဲ အောင်ကြီးမိဘတွေ အောင်ကြီးကိုသွားတွေ့တိုင်း အောင်ကြီးဘယ်လိုနေရတယ် ဘာဖြစ်နေလဲ ဘာပြောချင်လဲဆိုပြီးခဏခဏ မေးခိုင်းလေ့ရှိပါတယ် ကျွန်မနဲ့အောင်ကြီးကတော့ မတွေ့ရသေးပါဘူး ဒါပေမယ့် သူကို ကျွန်မမှာနေတာ ပြောနေတာ သူသိပါတယ် သူကိုစိတ်ပူနေကြောင်း သူတခုခုဖြစ်ရင် ကျွန်မကိုတော့ […]
တခါတုန်းက မျိုးကြီးဆိုတာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွေကို သူ့အခွေလေးစမ်းဖွင့်ပြဖို့ လိုက်တောင်းပန်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် …
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွေကို သူ့အခွေလေးစမ်းဖွင့်ပြဖို့ လိုက်တောင်းပန်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် စိတ်ဓါတ်ကျတဲ့သူများဖတ်ကြည့်ပါ။ တခါတုန်းက မျိုးကြီးဆိုတာ … တခါက …. တောင်ဥက္ကလာ ကားလမ်းမ တစ်ခုမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တော်တော်များများ ထိုင်သော နေရာတစ်နေရာကို ဦးထုပ်ခပ်ငိုက်ငိုက် ဆောင်းထားပြီး ဂျင်းအကျီင်္ဝတ်လူနှစ်ယောက် ဝင်လာတယ်.သူတို့ မျက်နှာတွေကို သေချာစွာ မမြင်ရ. ဒါကြောင့် […]